Valanjavaboary Mikea: voakapa ny ala amin’ny velarana 12 ha | NewsMada
Valanjavaboary Mikea: voakapa ny ala amin’ny velarana 12 ha
12 ha ny ala voajanahary nokapaina ary navadika ho arina fandrehitra nataon’olona 10 tao anatin’ny valanjavaboary nasionaly Mikea, ny 14 novambra lasa teo. Tratran’ny tomponandrakitri-paritry ny minisiteran’ny Tontolo iainana ao Atsimo Andrefana sy ny zandary ao Tsianisiha ary ny mpiasan’ny vala tao anatin’ny valanjavaboary izy ireo tao Andraketa, fokontany Andranodehoka, kaominina Mileanaka (Toliara II). Efa natolotra ny fitsarana, ny fiandohan’ny herinandro lasa teo, ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Toliara izy ireo, araka ny fampitam-baovao nalefan’ny Madagascar National Parks.
Hitan’ireo tomponandraikitra any an-toerana fa ankoatra ny hazo voakapa maro, 30 ny toerana tratra fanamboarana arina. Voafaritry ny lalàna 2015-005 tamin’ny 22 janoary 2015 momba ny lalàna mifehy ny fitantanana valanjavaboary fa fandikan-dalàna ny fikapana ala sy ny fipetrahana tsy nahazoana alalana ao anatin’ny vala ka nisy ny fametrahana fitoriana eny anivon’ny fitsarana ao Toliara momba ity tranga ity.
Ny volana aogositra lasa teo, taorian’ny fihaonana teo amin’ny zandary sy ny sefo fokontany ao an-toerana sy ny vaomiera mpiaro ny vala ary ny tomponandraikitra ao an-tanàna, nentanina hanajanona ny fikapana sy fandripahana ala ny vahoaka tamin’ny alalan’ny haino aman-jery misy. Nitohy ihany ny fitrandrahana ka nidina tampoka nijery ny zava-misy eny ifotony ny telo tonta ary niafara tamin’ny fisamboarana ireo mpitrandraka.
Rehefa nosokajina ho valanjavaboary nasionaly ny Mikea, ny taona 2011, nahatratra 5 000 ny olona nisitraka tetikasa tantsoroka nentina nanampy ny fidiram-bolan’ny vahoaka rehefa tsy nitrandraka ala intsony izy ireo. Tokony hanampy amin’ny fiarovana ny vala sy ny harena rehetra ao anatiny ny mponina. Anisan’ny valanjavaboary 43 tantanin’ny Madagascar National Parks ny vala Mikea.